August 28th, 2018 10:31 am
“डर लागिरहेको छ मलाई ? कसरी भनुँ ? कहाँ बाट शुरु गरु ? खै थाहा छैन मैले जे भन्न गईरहेको छु तपाईलाई कस्तो लाग्ला भनेर ? यो कुरा मैले कसैलाई पनि भनेको छैन”
August 22nd, 2018 3:06 pm
बलात्कार– स्त्रीद्वेषी संस्कृतिमा हुर्कने विषवृक्ष हो । हामी त्यही विषवृक्षका फेदमा अनेक गीत, कविता, नीति श्लोक र गाउँखाने कथा भन्दै, सुन्दै, रमाइलो मानेर बसिरहेका छौं ।
पूर्व जानकारीः यस लेखमा यौन, जननाङ्ग, यौन अत्याचार, बलात्कार, सम्भोग आदिलाई प्रत्यक्ष बुझाउने वा सङ्केत गर्ने केही शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ। छापामा यौनसित सम्बन्धित शब्द र चर्चा पढ्न नरुचाउने तथा प्रचलित मूल्य, मान्यता, नियम र विचारको आलोचना गरेको सुन्न नसक्नेहरूसित अग्रिम क्षमायाचना ।
सबभन्दा पहिले पाठकलाई एउटा प्रश्न– के तपाईं बलात्कार गर्न सक्नुहुन्छ ?